Mararka qaar habka ugu fudud ee uu u daawado filimada 3D waa iyada oo your computer. Oo waxaad iyaga u qulquli karaa iyada oo la xidhiidha aad internet, iyo haddii aad rabto, in aad aad computer ku xidhi kartaa TV ah Kormeere dibadda si aad u eegto filimada aad shaashadda weyn. Si aad u awoodo inuu sameeyo in, inkastoo, waxaad u baahan tahay a video ciyaaryahan 3D on your computer. Halkan waxaa ku qoran toban ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican video ee kombiyuutarada.
Barnaamijkan waxaa kaalinta by muraajiceeyey badan oo ka mid ah ugu sahlan in ay isticmaalaan. Waxaa loogu tala galay in la Windows 8 shaqeeyaan oo qoreysa interface la mid ah ka shaqeeya shaashad buuxda. ArcSoft horumari karaa tayada image aad videos lagu jiro loo maqli karo oo ka ciyaari kara cajalladaha BluRay, oo lagu daray waa hab sida loo ciyaaro filimada 2D. Ma doonaysaa in la isticmaalo telefoonka smart sida rimuut koontaroolka kaas oo? Software Tani waxay samayn kartaa in. Ilaa hadda sida qiimaha ciyaartoyda video tagaan, inkastoo, taasi mid waxaa loo arkaa inay u qaali ah. ArcSoft waxa kale oo aan u qalabaysan u ciyaaro 4K videos ka kamaradaha GoPro.
Tani waxay la mid kharash badan oo ka yar barnaamijka ArcSoft ku sameeya, qiimaha kiisaska intooda badan kala bar, oo waxa aanu ku ciyaari videos 4K GoPro. Waxaa xitaa la Timaadda set oo ah koob 3D sanduuqa. Waxay leedahay awood ah ilaa diinta kuu ogolaanaya inaad u ciyaaro DVDs joogto ah sidan oo kale sida in ay images u eg BluRay. Si kastaba ha ahaatee, inuu u ciyaaro cajalladaha BluRay dhabta ah, waxaad u baahan tahay oo kaliya harsan computer desktop ah, sida video kaarka dhafan caadi ahaan laga helo laptop ah lama jaanqaadi karaan. WinDVD sameeya ciyaaro tiro ka mid ah qaabab file video, iyo in ay 3D badalo kartaa filim 2D. Waxay leedahay fudud ah si ay u fahmaan bar navigation u video loo maqli karo.
Haddii aad soo iibsatay kombiyuutar in dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaa laga yaabaa in soo buuxiyey oo la software loo maqli CyberLink DVD ku raran yihiin waxaa ku horeba. Haddii aad si aad u iibsato PowerDVD, oo aad ka heli doonto in ay waafaqsan waa jaban barnaamijka ArcSoft ee kor ku xusan. Waa xoogaa in ay isticmaalaan ka badan laba barnaamij oo hore ka adag, laakiin marka aad u hesho xaliso waxaa ka mid ah, waxa ay si toos ah quruxsan-weeraryahanka. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala inuu ka ciyaaro 4K video shot on kamaradaha GoPro, oo u bedeli karaan 2D videos in 3D. PowerDVD sidoo kale u oggolaanaysa in hoorto iyo ka aaladaha aad mobile. Sida barnaamijka ArcSoft ah, waxa aad awoodi kartaa ilaa barnaamaj qalab mobile si loogu isticmaalo sida rimuut koontaroolka kaas oo.
Tani waxay si gaar ah u furan yahay ciyaaryahan isha software, taasoo la micno ah waa lacag la'aan ah. VLC waa doorasho caan ah oo video loo maqli karo. Inkasta oo aan la dhigay ilaa ciyaari cajalladaha BluRay, waa ku dhawaad ​​sidoo kale ka ciyaari kara qaab video kasta oo ka ciyaari kara DVD xamili geeyo nool. Waa quruxsan fudud si ay u bartaan sida loo ciyaaro filimada 3D on VLC, sidoo kale. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee ku saabsan VLC waa in ay isku dayaan haddii aad dhibaato ciyaartoyda kale u ciyaaro aad video. VLC sidoo kale uu awoodaa inuu sameeyo qaar ka mid ah video tafatirka ee aasaasiga ah sida beerista ama qoqobada aad videos. The screens navigation, malana aad ka heli karo ee ku saabsan barnaamijyada kale ee ka maqan yihiin halkan, laakiin waa interface aad u nadiif ah oo si sahlan loo isticmaali. Ma jirto awood ay u isticmaalaan telefoonka smart sida aad u fog, laakiin barnaamij u samayn karaa filimada VLC 3D.
Barnaamijka trialware tani dhab ahaan waxa horyaalka u leeyahay - taas oo 3D videos, laakiin waxa ay sidoo kale u ciyaara iyo sidoo kale videos oo sameeya qaar ka mid ah diinta 3D. (Waxaad u baahan doontaa in aad iibsato nooca buuxda si uu u sameeyo beddelaad ah iyo in meesha laga saaro watermarks.) Waxaa qoreysa interface ah oo nadiif ah oo sahlan looga heli karo iyo sida loo isticmaalo gacanta ku. A button 3D waaweyn ee menu loo maqli karo ee hoose ee shaashadda kuu ogolaanayaa inaad si ay u bilaabaan ciyaaro 3D isla markiiba, sidaa daraadeed inta aad leedahay 3D koob diyaar. Waxaa diinta version anaglyph caadiga ah ee 3D in buluug iyo casaan.
Tani ciyaaryahan fududahay in la isticmaalo waa freeware, oo ay taageerto noocyada waaweyn ee file video oo lagu daray waa hab sida loo ciyaaro filimada 2D. Waxa ay diinta qaarkood ka 2D in 3D ay ku daray saamaynta anaglyph, si aad u baahan doontaa koob 3D si ay u arkaan filimka. Waxaad astaysto interface loo maqli karo la qarbeddaduna ama ku darto tahay album u cajalado maqal ah haddii aad rabto, laakiin haddii aad u doonayaa inuu ku soo shirtagi in interface aasaasiga ah, waxaad samayn kartaa in sidoo kale. Waxay noqon kartaa dhif ah in la helo ciyaaryahan audio in sidoo kale sameeya 3D, samaynta KM u gaar ah ee la xiriira in. KM u oggolaanaysa in looga gol leeyahay qaar ka mid ah video inta lagu guda jiro loo maqli karo si ay u egtahay iyo furuutka, sidoo kale. Marka aad ku faraxsan tahay sida aad video muuqataa yihiin, waxaad ku dhejin kartaa in daruurtii u fudud la wadaago.
Laga soo bilaabo mid ka mid ah dejiya ee hormuudka ka ah kaararka video yimaado software loo maqli karo video in waxaa loogu talagalay in la jaan qaada inta badan qaabab video oo waaweyn. The koob NVIDIA 3D laga heli karaa si gooni gooni ah ayaa la qummaati loogu talagalay in la barnaamijkan shaqeeyaan. Ciyaaryahanka Tani waxay sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sawirrada dhijitaalka ah in uu soo bandhigo. Waxay leedahay interface user-friendly ah oo aad si fudud u helaan oo u isticmaali badhamada video loo maqli karo heerka. Marka aad rabto in aad aragto filim 3D aad leedahay fursado kala duwan oo dhowr aad heli karto, oo ay ka mid dhinac iyo anaglyph. Muuqaalada tafatirka aasaasiga ah sida abuurka iyo zooming sidoo kale waxaa laga heli karaa. Haddii aad ka shaqeeya sixiddiisa filimada kuu gaar ah, waxaad ku dari kartaa bogga copyright ah oo ay la socdaan metadata kale, sida laga arday watermark ku image hoose.
Tani ciyaaryahan video casri ah u oggolaanaysa in loo maqli karo 3D anaglyph ee jecel videos aad, haddii ay ku badbaadi on your computer ama barta. Waxay leedahay tiro ka mid ah codsiyada xirfad leh, sidoo kale, isbitaalada iyo matxafyada in ay isticmaalaan tusaale ahaan. Waxaa xitaa taageertaa consoles'ka biimayn mooshin 3D. Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah, ama iibsato mid ka mid ah dhowr qeybood oo buuxa ciyaaray ogolaada in loo maqli karo ee ilaa 1920 X 1080 xaliyo 60p. Waxay u eg tahay laba movies-qeexidda sare ciyaaro waqti isku mid ah. Waxay leedahay fursado kale oo loo maqli karo, sidoo kale, ogolaanin in la isticmaalo iyadoo koob 3D, projectors, iyo telefishin plasma. The versions buuxa yimaa-xirfadeed ee DepthQ noqon kartaa mid aad u qaali ah, laakiin baahida shirkadaha ganacsiga, waxa ay kulan kaamil ah.
9. Player karaa
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay si loo kordhiyo khibradda daawado ee kombiyuutarka ama TV 3D ah by DVD. Waxaa ogolaan karo loo maqli karo ee BluRay iyo videos-qeexidda sare iyo sidoo kale loo maqli karo ee 2D videos. Khariidad ee interface waa u fududahay on indhaha, waana customizable. Waxaa loo isticmaali karaa noocyo kala duwan oo kombiyuutarada, labadaba 32 yara iyo 64 bit.
Barnaamijkan badan sida AnyDVD u muuqataa, laakiin waa lagu loogu talagalay in lagu sameeyo BluRays eegi weyn, iyo waxa ay ka ciyaari karaan HD DVD, wax badan oo ka mid ah ciyaartoyda aan la dhigay ilaa sameeyo. Waxaa isku galay nidaam guriga tiyaatarka in uu leeyahay computer ah ee ay wadnaha si fudud. Waxaa sidoo kale loogu tala galay in halmaantay codes gobolka, si BluRay ajnabi ah lagu ciyaari karo on; weyn shaqaalaha military yihiin kuwa dibada iyo kuwa laga yaabo in waqti adag tahay helitaanka Gobolka 1 cajalladaha.
Bonus. Wixii barnaamij samayn kara oo keliya ku saabsan wax kasta oo aad rabto in ay, waxaa jira Wondershare Player . Waxaa ka ciyaari kara ku dhowaad qaab kasta oo ka mid ah videos, iyo sidoo kale cajalad la duubay. Iyo, waxaa u ciyaara DVDs iyo cajalado guriga, samaynta Wondershare mid ka mid ah oo kaliya tago-ka ciyaaryahan video aad u baahan tahay. Wondershare Sidoo kale xamili kartaa qaabab weyn ee subtitles - SRT, SSA, oo dameer.
Wondershare Uma baahna badan oo xasuusta kombiyuutarka in ay ku shuban, sidaas darteed waa degdeg ah oo hufan. Interface waa nadiif ah oo si sahlan loo isticmaali, iyagoo wata cayn kasta oo ah gacanta ku aad si sahlan u heli lahayn iyo xayeysiis dhisayaa ilaa inta lagu guda jiro loo maqli karo in aad hoos u dhigi. Xataa waxaad bookmark karo aad jeceshahay videos internet, oo aad marin iyaga ka dib iyadoo la isticmaalayo qalab mobile la Wondershare app ee lagu rakibay, ama computer ugu muhiimsan ee aad.
Haddii aad rabto in aad isticmaasho barnaamijka fudud oo la soo buuxiyey oo leh, download Wondershare oo u dhiiba isku day ah. Ma ahan oo kaliya hab sida loo ciyaaro filimada 2D, laakiin sidoo kale waa in aad khayraadka one stop dhammaan noocyada video aad.
Soo koobid. Sidaas daraaddeed waxaa aad, 11 ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican video ka ciyaari kara 3D iyo sidoo kale qaabab kale oo video leeyihiin, iyo qaar ka mid ah xitaa ma samayn karo loo maqli audio iyo sidoo. Haddii aad doonayso in aad qabato tijaabiyaan qaar ka mid ah, si xor ah u soo bixi versions maxkamadda iyo u qaadan, waayo, wadid tijaabo ah. Habee qarbeddaduna oo la ciyaaro Layouts - waa idinka ayay idiin taallaa. Haddii aad rabto hal barnaamijka oo dhan in ay samayn karto, download ciyaaryahanka Wondershare iyo load in video maktabadda. Doorashada adigaa leh. Happy tijaabinayaan!
> Resource > Windows > Top Toban 3D Video Players u PC